जनै किन लगाइन्छ ? बैज्ञानिक कारणहरू यस्ताे रहेछ । - Lekhapadhee September 28, 2020
जनै किन लगाइन्छ ? बैज्ञानिक कारणहरू यस्ताे रहेछ ।
लेखापढी २६ श्रावण २०७७, सोमबार १५:५२
हिन्दू धर्मालम्बीहरूकाे जनैपूर्णीमा एक महत्व्पूर्ण पर्व हाे । जनै पूर्णीमा पर्वसँग हिन्दुहरूले लगाउने जनैसँग सम्बन्धित छ । यो पर्व सत्ययुगमा दानवले देवताहरुलाई गुरु बृहस्पतिले मन्त्रिएर लगाइदिएको यज्ञोपवीतका कारण देवताहरुको रक्षा भएको भन्ने पौराणिक मान्यताका छ । यसै पौराणिक मान्यताका आधारमा रक्षाबन्धन वा जनै पुर्णीमा सुरुवात भएको मान्यता छ ।
प्रत्येक बर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा खासगरी हिन्दुका सोह्र संस्कार मध्ये एक ब्रन्तबन्ध गर्दा बैदिक मन्त्रका साथ गुरुले जनै पहिराइदिने प्रचलन रहेको छ ।
के हाे जनै ?
हिन्दुहरुले बाँया काँधबाट छड्के पारी दायाँ हातमुनी खोकिलासम्म पहिरिने सेतो सुतीको धागोबाट बनेको पवित्र धार्मिक डोरीलाई जनै भनिन्छ । जनै तीन वटा पवित्र शुत्रबाट बन्छ यी तीन सुत्र बह्मा, विष्णु, महेश्वरको प्रतिक मानिन्छ । देवऋण, पितृऋण र ऋषिऋण अनि सत्व, रज र तमको प्रतिक पनि यसलाई मानिन्छ । यी तीन सूत्रहरु गायत्री मन्त्रका तीन चरणको र तीन आश्रमको पनि प्रतिक मानिन्छ । प्राचीनकालमा पहिले शिष्य, सन्त तथा ब्रामण बनाउनका लागि दीक्षा दिने प्रचलन थियो । यही दीक्षा दिने क्रममा नै एक जनै धारण गर्नु पनि अनिवार्य नै थियो ।
बैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट जनै
जनै लगाउँदा मानिस झनै स्वस्थ्य रहेन पत्ता लागेको छ । यसले हृदय रोगको सम्भावनालाई कम गर्दछ । चिकित्सा विज्ञानका अनुसार दाँया कानको नशा अण्डकोष र गुप्तेन्द्रियसँग जोडिएको हुन्छ । दिशा गर्ने समयमा दाँया कानमा सिउरिनाले शुक्रको रक्षा हुनको साथै नराम्रो सपना देख्ने पुरुषको लागि दाँया कानमा जनै राखेर सुतेमा नराम्रो सपना देख्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्दछ । यो पनि मानिन्छ कि शरीरको मध्यभागबाट पिठ्यूमा जाने एक प्राकृतिक रेखाले विद्धुत प्रवाहको काम गर्छ । यो रेखा दायाँ काँधबाट कम्मरसम्म फैलिएको हुन्छ । त्यसैले जनै लगाउनाले विद्धुत प्रवाह नियन्त्रण हुन्छ । जसको कारण काम–क्रोधमा नियन्त्रण राख्न सजिलो हुन्छ ।
जनै लगाउनको फाइदाहरु
क) स्मरण शक्तिको रक्षा ।
ख) शुक्रकिटको रक्षा
ग) आचरणको शुद्धताले बढ्छ मानसिक बल
घ) किड्नीको सुरक्षा
ङ) हृदय रोग तथा ब्लडप्रेसरबाट बचाउन
च) कब्जियतबाट छुटकरा
छ) घुर्ने बानीको अन्त्य
ज) दुष्ट आत्माहरुबाट रक्षा
जनैको लम्बाइ ९६ औंला हुन्छ किनकी जनै धारण गर्ने व्यक्तिले ६४ कला र ३२ विद्या सिक्ने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । बत्तिस विद्या चार वेद, चार उपवेद, ६ अंग, ६ दर्शन, ती सूत्रग्रन्थ र नौ अरण्क मिलेर बन्छन् । चौसठ्ठी कलामा वास्तु निर्माण, व्यञ्जनकला, चित्रकारिता, यन्त्र निमार्ण लगायत पर्छन् ।
(लेखक नियममित रूपमा लेखापढीमा आलेखहरू लेख्नुहुन्छ ।